ဒေါင်လိုက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်ခရု Slicer, လိမ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရှုးကြောင်လိမ်
ဒေါင်လိုက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်ခရုသင်သုပ်သည်ဖြတ် style.Great နှင့်ကျန်းမာအခြားရွေးချယ်စရာအဘို့လိုအပ်သင့်လျော်သောဓါးသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့, ဓါးသွားဖြတ်တောက်၏4စတိုင်များနှင့်အတူ seconds.Vegetable လိမ်၏အမှု၌အံ့သြဖွယ်အပါအသို့သင့်ရဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသီးအပွ Slicer-Turn ခေါက်ဆွဲသို့မဟုတ်တခြားအစားအစာဖြစ်သည်။ ခေါက်ဆွဲတစ်ကျန်းမာ, အမြန်-ထမင်းချက်အခြားရွေးချယ်စရာသို့မဟုတ်အခြားဟင်းလျာများတစ်အိမ်ရှင်, စူပါသုပ်အတွက်စံပြ။
ဒေါင်လိုက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်ခရုစဉ်ဆက်မပြတ်လိမ် strands Slicer-ပြင်ဆင်ပါသို့မဟုတ်ဖဲကြိုးကြက်သွန်နီ, မုန်လာဥနီ, zucchinis, သခွားသီး, အာလူး, ချိုမြိန်အာလူးနှင့်တူဟင်းသီးဟင်းရွက်အဘို့ဤလိမ်ဟင်းသီးဟင်းရွက် slicer.Perfect နှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသီးအချပ်များနှင့်ထို့ထက် ပို. ကောက်။
အသီး & ဟင်းသီးဟင်းရွက် Tools များဟင်းသီးဟင်းရွက် Slicer
61.5 * 47.5 * 37cm
1500 Piece / ပိုငျးပိုငျး
ကို ABS + အက်စ်အက်စ်ဓါး
စက္ဏူထူနှုန်း6PCs
ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ် '' ကိုယ်ပိုင်ဖိအား '' အင်္ဂါရပ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပေါ်သို့တစ်စုံတစ်ရာဖိအားပေးမှုလျှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲ, မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မစိုက် spiralize မှနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါပေါင်းလိုက်သောဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပေါ်ကိုဖိအားသက်ဆိုင်သည်အလိုအလျောက်လက်နက် ပြု. သုံးစွဲ; ရိုးရှင်းစွာလက်ကိုင်ဖွင့်နှင့်လှပသော strands သို့သင့်ရဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်အသီးအပွအသွင်ပြောင်း။ လိုအပ်လုံးဝတံတောင်ဆစ်-အမဲဆီ
သင်တိုင်းဖြတ်စတိုင်အဘို့လိုအပ်သင့်လျော်သောဓါးသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဓါးသွားဖြတ်တောက်၏4စတိုင်များနှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်။
ခေါက်ဆွဲတစ်ကျန်းမာ, အမြန်-ထမင်းချက်အခြားရွေးချယ်စရာသို့မဟုတ်အခြားဟင်းလျာများတစ်အိမ်ရှင်, စူပါသုပ်အတွက်စံပြ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်အဆိုပါဓါးသွားအနီးသင်၏လက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လုံးဝမလိုအပ်အတူလုံခြုံဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းစွာအလက်ကိုင်လှည့်ကို၎င်း, '' ကိုယ်ပိုင်ဖိအား 'အင်္ဂါရပ်ဓါးပေါ်သို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုဆင်းတွန်းပါလိမ့်မယ်။
မျှသာစက္ကန့်အတွင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှာဖွေနေအပါအ Make; zucchini ခေါက်ဆွဲ, curly fries, သခွားသီးဖဲကြိုး strands, ကြက်သွန်ကွင်း, ပန်းသီး strands နှင့်စက္ကန့်တစ်ဦးအမှု၌ပိုပြီးဖန်တီးပါ။
ဤအစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဒီဇိုင်းများနှင့်ပိုမိုဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးများကိုစားရန်သင့်မိသားစုကိုရယူပါ။ zucchini, သခွားသီး, အာလူး, မုန်လာဥနီ, ပန်းသီးနှင့်ပိုပြီးအပါအဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသီးမျိုးစုံနှင့်အတူသုံးပါ
ကျန်းမာ together.Come စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အခုအချိန်မှာတစ်လိမ် slicer မဝယ်ရအောင်။
သင်တိုင်းဖြတ်စတိုင်အဘို့လိုအပ်သင့်လျော်သောဓါးသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဓါးသွားဖြတ်တောက်၏4စတိုင်များနှင့်အတူလိမ်။
သငျသညျအမြိုးမြိုးသောအရွယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခေါက်ဆွဲ, သုပ်, ခေါက်ဆွဲနှင့်ပိုပြီးဖန်တီးဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ဗီတာမင်စားသုံးမှုတိုးမြှင့်ဖို့ 2.Helpful လမ်း
အဆိုပါဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်အရသာကျန်းမာ spaghetti သို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုဖွင့်, သင်ဗီတာမင်စားသုံးမှုတိုးမြှင့်ဖို့ကူညီပေးမည့်အစာရှောင်ခြင်း, လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
3.Enjoy သင့်ရဲ့မုန့်ညက် & တိုးတက်ကောင်းမွန်သင့်ကျန်းမာရေး
ဒါဟာအားဖြင့်သင်တို့ကိုတန်ဖိုးရှိသောအချိန်, ငွေကြေးနှင့်သင်၏ကျန်းမာရေးအပေါငျးတို့သစဉ်တိုးတက်အောင်ချွေတာ, သင်မြောက်မြားစွာကျန်းမာသောဟင်းသီးဟင်းရွက်အခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ကယ်လိုရီ-loaded အစားအစာများကိုအစားထိုးဘို့အမြန်ဆုံးလမ်းပါပဲ။
သတိပေးချက်:ကွာဒီကနေ 1.Keep ကလေးများ။
စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူဤအကြောင်းအရာအား 2.Use, ပုံသဏ္ဍာန်ဓါးသွားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှောင်ကြဉ်ပါ။
3-Blade ခရု Slicer, ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ် slicer လိမ်
3-Blade ခရု Slicer-A ကောင်းဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်ခေါက်ဆွဲဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်ရှုး, သုပ်ထုတ်လုပ်သူဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ် .......
5 ဓါးသွား slicer, ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ် slicer လိမ်လိမ်
5 Blade ခရု Slicer, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခရု Slicer လိမ်သုပ်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခေါက်ဆွဲနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခေါက်ဆွဲ Make ရန် ......
5-ဓါးသွားဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ် slicer, ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်
5-ဓါးသွားဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ် slicer: ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခေါက်ဆွဲအီတလီခေါက်ဆွဲဥရောပနိုင်ငံဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား,5Blade အဆိုပါ 5-ဓါးလိမ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အတူ ......
2 ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခရု slicer နှင့်လိမ္မော်ရောင် Juicer အတွက် 1
2 ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခရု slicer နှင့်လိမ္မော်ရောင်အတွက် 1 ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ် slicer နှင့်လိမ္မော်ရောင် Juicer ကျွန်ုပ်တို့၏2အတွက် 1 ......
ဒေါင်လိုက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်ခရု၏အမှု၌အံ့သြဖွယ်အပါအသို့သင့်ရဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသီးအပွ Slicer-Turn ......